अल्ट्रासोनिक कूल मिस्ट ह्युमिडिफायर, अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर, चीनमा अल्ट्रासोनिक एयर ह्युमिडिफायर निर्माता र आपूर्तिकर्ता
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] व्यवसाय प्रकार:Manufacturer मुख्य बजार: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide निर्यातक:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report, BSCI विवरण:अल्ट्रासोनिक कूल मिस्ट ह्युमिडिफायर,अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर,अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफायर,अरोमा डिफ्यूजर ह्युमिडिफायर,,
Home > उत्पादनहरू > अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर
अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर को उत्पाद कोटिहरु, हामी चीन, अल्ट्रासोनिक कूल मिस्ट ह्युमिडिफायर , अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर आपूर्तिकर्ताओं / कारखाना, अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफायर आर एन्ड डी को थोक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादनहरु र विनिर्माण देखि विशेषज्ञता प्राप्त गर्दै छन्, हामी एकदम सही पछि बिक्री सेवा र प्रौद्योगिकी समर्थन छ। तपाईंको सहयोगको लागि अगाडि हेर्नुहोस्!
इजी क्लिन कस्टम कलर पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक एयर ह्यूमिडिफायर यो डेस्क कार्य हो वा विश्राम यो जहिले पनि चुपचाप वरिपरि रहन्छ आफ्ना भावनाहरू साझा गर्नुहोस् दृष्टिबाट गन्धसम्म तपाईंलाई न्यानो गार्ड दिनुहोस् तपाईंको हृदयलाई रक्षा गर्न दुईवटा बत्तीहरू सुगन्ध विसारक दुई प्रकाश मोड संग सुसज्जित छ छनौट गर्न स्वतन्त्र महसुस...
ठूलो कोठाको लागि यूनिभर्सल आवश्यक तेल विसारक ह्यूमिडिफायर डिटुओ ह्युडिफायर, ठूलो क्षमताको शीर्ष पानी इन्जेक्शन डिजाइन, समय बचत र चिन्ता, दुई किसिमको कुहिर उत्पादनको विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न, ml०० मिलि ठूलो पानी ट्या tank्की, बारम्बार पानी भर्ने समस्या हटाउने, स्मार्ट टच बटन, संवेदनशील अपरेशन, घनिष्ठ levels...
यूनिट मूल्य: USD 8.46 - 9.54 / Piece/Pieces
यूनिट मूल्य: USD 11.54 - 13.08 / Piece/Pieces
यूनिट मूल्य: USD 12.77 - 14.15 / Piece/Pieces
यूनिट मूल्य: USD 13.69 - 15.08 / Piece/Pieces
चीन अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर आपूर्तिकर्ता
कसरी अल्ट्रासोनिक humidifier काम?
वाष्पीकरणदायी कूल धुंध ह्युमिडिफायर फ्यानहरूमा उनीहरूको फिल्टरहरू मार्फत हावा उडाउन भर पर्दछ। अर्कोतर्फ, DITUO अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर जस्ता अल्ट्रासोनिक एयर humidifier, मा एक सानो Atomizing प्लेट हुन्छ जुन अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेन्सीमा कम्पन हुन्छ। यी अल्ट्रासोनिक ध्वनिहरू मानवलाई सुन्न नसकिने हुन्छन्, तर तिनीहरू केही राम्रा शक्तिशाली चीजहरू गर्न सक्षम छन्। तिनीहरूले पनि हामिडिफायरको निर्मित जलाशयबाट पानीको कणहरू भाँच्न सक्दछन् एउटा ठण्डा बाफमा। उपकरणले यस राम्रो धुंधलाई हावामा छोड्छ, तत्काल कोठाभरि आर्द्रता वितरण गर्दछ।
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन अल्ट्रासोनिक शान्त मिश्री ह्युमिडिफायरले तपाईंको घरको लागि विचार गर्न लायक छ।
तिनीहरू वरिपरि शान्त humidifiers को हुनुहुन्छ। थप रूपमा, अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायरले तातो प्रयोग गर्दैन, त्यसैले उनीहरूलाई न्यूनतम बिजुली चाहिन्छ। यो सायद अल्ट्रासोनिक्सको सबैभन्दा ठूलो फाइदाहरू मध्ये एक हो, किनकि यसले लामो समयको लागि तपाईंको बिलमा महत्त्वपूर्ण बचत निम्त्याउन सक्छ।
अरोमा डिफ्यूजर ह्युमिडिफायर सजिलै पोर्टेबल छ, र तुरुन्त खोल्न र बन्द गर्न सकिन्छ। तताउने तत्त्वको लागि पानी उमाल्न कुनै पर्खाइको समय छैन, कि त किनभने धुन्ध दुलही मार्फत उत्पन्न हुन्छ।
उनीहरूको तुलनात्मक रूपमा सानो आकारलाई ध्यानमा राख्दै, घरको humidifier ले प्रभावकारी मात्रामा बाफ उत्पादन गर्न सक्दछ। त्यस्तै रूपमा, ती साना कोठाहरूमा उचित ओसको स्तर कायम राख्नको लागि एक उत्तम विकल्प हो।
अल्ट्रासोनिक कूल मिस्ट ह्युमिडिफायर
अरोमा डिफ्यूजर ह्युमिडिफायर
अल्ट्रासोनिक कूल धुने ह्युमिडिफायर एयर